Maka: isihloko se-wordpress | Martech Zone
I-Tag: theme isihloko
Ithimu Okuwukuphela Kwayo Oyoze Uyidinge ye-WordPress: Avada
ULwesibili, April 17, 2018 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 Douglas Karr
Sekuyiminyaka eyishumi ngakha ama-plugins wesiko futhi ngishicilela, ngilungisa futhi ngakha izingqikithi zenkambiso, futhi ngisebenzisa i-WordPress kumakhasimende. Bekulokhu kuyi-roller coaster futhi nginemibono eqinile kakhulu mayelana nokuqaliswa engikwenzele izinkampani ezinkulu nezincane. Bengibuye ngigxeke abakhi - ama-plugins nezindikimba ezivumela ukuguqulwa okungavinjelwe kumasayithi. Ziyakhohlisa, zivame ukufuthanisa ngosayizi wamakhasi ewebhusayithi ngenkathi zihamba kancane
Martech Zone: Siyakwamukela Ekushicilelweni Kwami Okusha KweMartech!
NgoLwesihlanu, January 6, 2017 NgoMsombuluko, Novemba 2, 2020 Douglas Karr
Sekuyiminyaka kuphela ngagcina ukwenza kabusha i-WordPress site yethu. Ngenkathi ngangikuthanda ukwakheka, nganginethoni yama-plugins nokwenza ngezifiso ukwenza ukuthi isebenze ngendlela ebengifuna ngayo, nami. Nge-WordPress, lokho kungaqala ukupela inhlekelele ngokubuka kokusebenza futhi bengibona imifantu esisekelweni. Ngakho-ke, ngaqhubeka nokuzingela umklamo ongafaka zombili izibonisi ezinkulu kakhulu futhi
Faka ukugqwayiza kwe-CSS kusayithi lakho le-WordPress nge-CSS Hero's Plugin
NgoMsombuluko, Juni 27, 2016 Douglas Karr
I-CSS Hero iyisisetshenziswa esihle sokuguqulwa kwe-CSS kumatimu we-WordPress isikhathi esithile. Amathuluzi afana nalawa enza ukwenza ngezifiso kube lula kubasebenzisi be-WordPress abafuna ukwenza ngezifiso ukwakheka kwabo, kepha baswele ulwazi lokufaka amakhodi lwe-CSS oludingekayo. Izici ze-CSS Hero Faka i-Point ne-Click Interface - i-hover yegundane bese uqhafaza into ofuna ukuyihlela bese uyilungisa ukuze ivumelane nezidingo zakho. Itimu Agnostic - Faka amandla weHero kuzingqikithi zakho, cha
Amaphutha Wokuthuthukiswa Kwetimu Ejwayelekile ngeWordPress
NgoMgqibelo, Juni 28, 2014 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 Douglas Karr
Isidingo sokuthuthukiswa kwe-WordPress siyaqhubeka sikhula futhi cishe wonke amaklayenti ethu manje anendawo yeWordPress noma ibhulogi le-WordPress elishumekiwe. Ukuhamba okuqinile - okungathandwa yiwo wonke umuntu kepha kunezindikimba eziningi kakhulu, ama-plugins, nenani elikhulu labathuthukisi elinengqondo. Amandla okuguqula ubukhona bakho bewebhu ngaphandle kokukhuhla ipulatifomu bese uqala kabusha kuyinzuzo enkulu. Uma uke waba ne-
Yenza ngezifiso izihloko zakho ze-WordPress kalula
NgoLwesine, Novemba 21, 2013 Douglas Karr
Bengifuna i-plugin noma ikhodi ethile yokuxuba izihloko ekhasini lethu lasekhaya ku DK New Media ukuzijabulisa futhi ugqokise ikhasi lasekhaya kancane. Inkinga bekuwukuthi ngisebenzise itimu enezinkambu ezithile zomugqa wethegi nencazelo yesayithi, futhi angizizwanga ngithanda ukuyihlukanisa kulokhu kuguqulwa. Ukwenza lokhu ngama-plugins nokuguqulwa kwetimu kungadinga